Akụkọ - Ajụjụ ọnụ | Zhu Fuyu: - Ọdịdị nke onye nlereanya!
Ajụjụ ọnụ | Zhu Fuyu: - Ọdịdị nke onye nlereanya!
A kọọrọ na post-90s bụ ezumike na nchekwube "ọgbọ mmekọrịta", post-80s bụ mgbanwe na ọdịiche dị iche iche "ọgbọ azụmaahịa", na afọ 70 bụ ezi ọgbọ na azụmaahịa "ọgbọ azụ." Na Zhu Fuyu, onye ahia di egwu nke Youxing Sharks na 1981, obughi na enweghi otutu nlezianya na mercantilism nke puru iche nye ndi amuru na 1980s, kamakwa o na - eme ihe ike nke 70s na nchekwube nke 90s. Ọ na-akwụwa aka ya ọtọ, na-agbadakwa ala ma nwee ọmịiko. Ezigbo ezi omume, chee echiche ma mee. N'ịdabere na mmụọ ya na-adịghị agbanwe agbanwe na nke ọhụụ, ọ jiri aka ya na-enyocha mgbe niile wee bụrụ onye nlereanya maka otu ndị na-ere ahịa shark, ọ mekwara ndụ dị iche na nke magburu onwe ya!
Mmepe nke ụdị ọrụ Zhu nwere ike bụrụ ụbọchị ọrụ ya. Ya ịga ụlọ akwụkwọ nwere ike ịbụ ihe siri ike karịa nke ndị ọgbọ ya. Dị ka nwa akwụkwọ, ọ bụghị naanị na ọ ga-ebu nrụgide nke ịmụ akwụkwọ na ule, kamakwa ibu nke ịmụ akwụkwọ na mgbazinye ego. Fọdụ ndị na-ekwu na n'ihi na ndụ nwere mgbape, ìhè anyanwụ nwere ike ịmata. N'ihi nke a, o kpebiri na ya agaghị agbazinye mmadụ ego ọ bụla ọzọ mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ. Ọ bụ nnọgidesi ike izizi mbụ a mere ka ọ họrọ ndị ọrụ na-adịghị arụ ọrụ ugbu a ozugbo ọ gụsịrị akwụkwọ, wee bido azụmahịa nke ya.
Roadzọ azụmaahịa malitere na Xuzhou. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, Maazị Zhu bịara Xuzhou naanị ya wee bido na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ụlọ. Na ahịa Xuzhou nke yiri ka e zuola òkè ahịa, Maazị Zhu ghọtara na ọ bụrụ na ọ chọrọ ịgbanye ụzọ ọhụrụ, ọ ga-agbaso usoro nke oge ma gaa n'ihu na-agbanwe agbanwe. O kpebiri imepụta obere ụyọkọ e-commerce na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọdịnala. Site n'iji nlezianya na-amụsi ihe ike na mgbalị siri ike ọ na-eme, o jiriwo echiche ọhụrụ mee ihe n'ụzọ zuru ezu, ọnụ ahịa kachasị n'ịntanetị n'otu ụbọchị nwere ike iru ọtụtụ narị puku! Agbanyeghị, mgbe ị gbakọchara na njedebe nke afọ, akụ na ụba na-apụnara ọtụtụ uru. O chere na ọ karịrị akarị na-eme nke a, na ọdịnihu ya agaghị adị n'aka ya.
Ọ malitere ịchọta ụzọ ọhụrụ. N'oge ahụ, ọ dabara na arịa ụlọ ọrụ Zhu rụpụtara na-eji shark jigsaw gluu. Ọ chọpụtara na ejirila shark jigsaw gluu ihe karịrị otu afọ na enweghị nsogbu ọ bụla, ọnụ ahịa ya dịkwa elu. Ọ malitere itu ome na-ekesa Enwere echiche nke shark jigsaw gluu. N'oge a, ahịa nke Youxing Shark bidokwara isoro Mr. Zhu kwurịta uru dị iche iche nke nkwalite nke Youxing Shark Jigsaw Glue. O kpebiri ịnwale.
Otú ọ dị, ọdịnihu dị mma, ụzọ dịkwa nhịahụ. Nsogbu mbu nke Mazi Zhu zutere bụ na ọ ghọtaghị jigsaw gluu ma ọlị! O kpebiri ime ya n'onwe ya wee nwalee ya. N'okpuru ntuziaka nke onye na-ere azụ azụ shark, Maazị Zhu mụtara ezigbo ọrụ nke ịmata ọdịiche nke jigsaw gluu- "Esi". Nri a mere ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ntụkwasị obi nke Mr. Zhu pụta maka ịmalite nke abụọ ya! Iji bụrụ ọkachamara na gluu jigsaw ma nyere ndị ahịa aka inyocha ihe egwu dị egwu karịa, Maazị Zhu gbara mbọ karịa ịrụ ụlọ nrụpụta arịa. Ọ malitere iji nlezianya na-amụ usoro iwu nke jigsaw gluu ehihie na abalị, na-ejikwa nlezianya mara ihe ọmụma ngwaahịa. Mee ule na-eme mkpọtụ na nke isi n’ụlọ n’ụlọ.
Afọ anọ, nke ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ, agbanyeghị, mbọ a na-aga n'ihu Maazị Zhu ejirila mmesapụ aka kwụghachi ụgwọ. N'ajụjụ ọnụ ahụ, ọ sịrị: "esonyela m gị Youxing Shark ruo afọ anọ, enwekwara m nnukwu uru abụọ. Otu bụ imebi n'onwe m. Site na onye nkịtị rue ihe ịga nke ọma nke ọtụtụ nde ma ọ bụ ọbụlagodi nde iri, enyerela m aka nke ọma N'ihi ọtụtụ ihe egwu dị na nchekwa nchekwa, echere m na ọrụ m bara ezigbo uru ma baa uru, uru ọzọ bụ na ahụrụ m otu ụmụnne nwere ụdị echiche a ma dịrị uchu na-arụ n'elu ikpo okwu nke Youxing Shark. Anyị na-agbarịta ibe anyị ume ma na-asọrịta mpi n'etiti onwe anyị. Obi dị anyị ụtọ, onye ọ bụla na-ekwu na ọ bụ naanị ya ịbụ onye isi n'akụkụ niile nke ndụ, mana anyị abụghị otu, echere m na shark bụ ụlọ ndị otu anyị. nke ịbụ nke a bụ akụ dị oke ọnụ! "
Post oge: Apr-29-2020